Trondheim: Nin labo wiil oo reer Afgaanistaan ah xaley ku dilay Trondheim - NorSom News
Trondheim: Nin labo wiil oo reer Afgaanistaan ah xaley ku dilay Trondheim
Nin u dhashay dalka Afgaanistaan ayaa xaley labo wiil oo dhalinyaro reer Afgaanistaan ah ku dhex dilay guri kuyaal magaalada Trondheim, halka uu dhaawacay mid kale. Ninkan oo markii danbe boolisku xabad ku dhaawaceen, ayay ku guuleysteen inay soo qabtaan, wuxuuna hada kujiraa xabsiga.
Ninka wax dilay iyo sadexda qof ee uu waxyeelada gaarsiiyay ayaa dhamaantood sanado kahor Norway kusoo galay qoxootinimo, waxeyna qaarkood ahaayeen saaxiibo isku dhow. Halka labo kamid ahna ay isku guri degnaayeen.
Booliska ayaa saaka soo gudbiyay magaca labada qof ee geeriyooday oo kala ah Nasratullah Hashimi oo 19 sano jir ahaa iyo Reza Alizada oo 17 sano jir ahaa.
Xigasho/kilde: VG(HALKAN KASII AKHRI)
Previous articleWarbaahinta Sweden iyo xisbiyada xagjirka ah oo durba weerar ku bilaabay xildhibaan Leyla Cilmi
Next articleNorway oo mar kale loo aqoonsaday wadanka ugu fiican ee aduunka lagu noolaan karo